‘एक दर्जन बच्चा पाउने धोको थियो तर पहिलो नै खेर गयो’
‘एक दर्जन बच्चा पाउने धोको थियो तर पहिलो नै खेर गयो’ क्यान्सर भएपछि लाग्यो– सन्तानप्रतिको मोह खतरनाक हुँदो रहेछ
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ बिहीबार, असोज २२, २०७७
प्रसवबारे कुरा गर्नुपूर्व पृष्ठभूमि र मातृत्वबारे चर्चा गर्छु ।
आमाको जस्तो पापी मन कसैको हुँदैन । न त आमाको जस्तो माया नै कसैको हुन्छ । छोराछोरीले नराम्रो काम गरे पनि बचाउन मन लाग्नु र उनीहरुको खुसीका लागि जे पनि गर्न तयार हुनु आमाको कमजोरी हो । ममा पनि त्यो कमजोरी छ ।
आफ्नो बच्चा जन्मिएर हुर्किएको समेत सपना देख्दै गर्दा मेरो फस्ट प्रेग्नेन्सी मिसक्यारेज भयो अर्थात् बच्चा खेर गयो । त्यतिबेला कहिल्यै जोडिन्नँ जस्तै गरी टुक्रिएँ ।
छोराछोरी कतै गएर नआउन्जेल मन बेचैन हुन्छ । उनीहरुले ‘मामु म घर पुगें’ नभनेसम्म सुत्न सक्दिनँ । वास्तवमा सन्तानको मायाले आमालाई कमजोर बनाउने रहेछ । सन्तानको मायाकै कारण कतिपय आमाले आफ्नो जिन्दगी नै बर्बाद पारेका छन् । तैपनि हर नारीलाई आमा बन्ने मोहले तानेकै हुन्छ । जुन ममा पनि थियो ।
डल जस्तै भएकीले डली !
सानोमा डल जस्तै थिएँ रे ! त्यसैले डल भन्दाभन्दै मलाई डली भन्न थालियो । खासमा मेरो नाम प्रतिभा गुरुङ हो । मेरो जीवनको किशोरावस्था निकै दुःखद तरिकाले बित्यो । आमालाई क्यान्सर भएको थियो । म नै उहाँलाई स्याहार्थें । अन्तिम समयसम्म मैले नै आमाको रेखदेख गरिरहें । मेरै छेउमा आमाले संसार छोड्दा म निकै विचलित भएँ ।
डली गुरुङ र उनको परिवार । फोटो : डली गुरु
त्यतिबेला डाक्टरले मलाई तिम्रो बच्चा हुँदैन भने । म बच्चाबच्ची रुचाउने मान्छे । यो कुरा सुन्दा सारै नरमाइलो लाग्यो ।
त्यतिबेला म १५ वर्षकी थिएँ । मनमा धेरै कुराहरु खेलिरहन्थ्यो । त्यही समयतिर मलाई टेलिभिजनका लागि वाइवाइ चाउचाउको विज्ञापनमा मोडलिङ गर्ने अफर आयो । मुड फ्रेस हुन्छ भन्ने सोचेर मोडलिङका लागि राजी त भएँ तर मेरो लुक्स ‘टम ब्वाय’को जस्तो थियो । तर ममा एउटा विश्वास थियो । जे काम पनि मनैदेखि गर्‍याे भने राम्रो हुन्छ । साँच्चै, निर्देशकले खोजे जस्तो भइदिन सकें ।
‘सबैले भन्थे-तिम्रो बच्चा हुँदैन’
त्यही विज्ञापनकै कारण मैले पाकिस्तानसँगको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ फिल्महरुमा अभिनय गर्ने मौका पाएँ । भेन्चर फिल्मकै क्रममा म फिलिपिन्स पुगें । त्यहाँ मेरो फरक पहिचान स्थापित भयो । फिलिपिन्सकै पहिलो महिला डिजे बनें । विदेशमा डिजेइङ मेरो कमाउने बाटो थियो । त्यही बाटोले मलाई फिलिपिन्सको विज्ञापनहरुमा पनि काम गर्ने अवसर दियो । १० वर्ष लामो विदेश बसाइ एक्ली युवतीका लागि सजिलो पक्कै थिएन । फिलिपिन्सबाट कहिले जापान, कहिले कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, अस्ट्रेलियामा बसेर फर्कें ।
कोखमा बच्चा हुँदा पनि ढुक्क हुन सकिनँ । हरेक रात पुरानो घटनाले झस्काइरहन्थ्यो ।
फिलिपिन्समा मोडलिङ गर्दा मलाई ‘एनोरेक्सिया’ नामक मनोवैज्ञानिक रोग लाग्यो । फोटो र ऐनामा हेर्दा आफूलाई मोटी देखिने रोगकै कारण मैले खानपानमा विशेष ध्यान दिन थालें । तर, बाहिर भेट्नेले सोध्थे, ‘किन यसरी दुब्लाएको ?’ खाना नखाएपछि म सुकेर बाँस जस्तै भइसकेको थिएँ । त्यसपछि केही खाए भने ‘भोमिट’ हुने ‘ब्लुमेरिया’ भन्ने रोग पनि लाग्यो ।
मेरो आन्द्रा सुक्दै गइसकेको थियो । मलाई एनोरेक्साले झनै मारेको । त्यही रोगकै कारण म नेपाल फर्कें । नेपालमा परिवारको साथ र मायाले मलाई राहत दियो । त्यति बेला डाक्टरले मलाई तिम्रो बच्चा हुँदैन भने । म बच्चाबच्ची रुचाउने मान्छे । यो कुरा सुन्दा सारै नरमाइलो लाग्यो ।
नेपाल आएपछि निराकार याकथुम्बासँग भेट भयो । निराकारसँगको भेट बाक्लिँदै गयो र सन् १९९४ मा हाम्रो बिहे लिम्बू परम्पराअनुसार भयो । बिहेपछि मलाई सन्तानको चाहना हुन थाल्यो तर डाक्टरले सन्तान हुँदैन भनेका थिए । साथीहरुका छोराछोरी हुर्किंदै गरेको देख्दा मलाई सन्तानको चाह झनै बढ्थ्यो ।
बिहे भएको लगभग २ वर्षपछि बच्चा बस्यो । म जति नै परिवारमा पनि उत्तिकै खुसी छाएको थियो । मैले आफ्नो बच्चा जन्मिएर हुर्किएको समेत सपना देख्दै गर्दा मेरो फस्ट प्रेग्नेन्सी मिसक्यारेज भयो अर्थात् बच्चा खेर गयो । त्यतिबेला कहिल्यै जोडिन्नँ जस्तै गरी टुक्रिएँ ।
डाक्टरले कारण प्रस्ट बताएका थिए, एनोरेक्सिया । आफ्नो शरीरको बोसो कम गर्न थोरै खाँदै गर्दा बिस्तारै खाँदै नखाने अवस्थामा पुगेपछि ममा मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्यो । यही कारण मलाई लागेको थियो– अब म कहिल्यै आमा बन्न सक्दिनँ ।
‘फिल्म खेल्न गर्भपतन गराएँ’
त्यतिबेला साढे २ महिनाको बच्चा खेर गएको थियो । म दुई कुराका कारण तनाबमा थिए । एक त, आफैंलाई बच्चाहरु सारै मन पर्ने, फुटबल टिम जस्तै सन्तान जन्माउने रहर अधुरो हुने भयो । अर्काे, सासूको एक्लो सन्तान निराकार भएकाले जसरी नि बच्चा जन्माउनु पर्ने प्रेसर ।
परिवारबाट त्यस्तो कुनै प्रेसर दिइएन तर आफैँलाई डर लाग्थ्यो । ५.८ उचाइको मेरो तौल जम्मा ४५ किलो थियो । जिउ सुकेको थियो । फेरि डेढ वर्षपछि मेरो महिनावारी रोकियो र म प्रेगनेन्ट भएँ । कोखमा बच्चा हुँदा पनि ढुक्क हुन सकिनँ । हरेक रात पुरानो घटनाले झस्काइरहन्थ्यो । तर सन् १९९७ मा जीवनको सबैभन्दा खुसीको पल रह्यो । पहिलो सन्तान निरन्तरको जन्म भयो ।
मानिसहरु सुत्केरीमा अनिद्राको कुरा गर्थे तर मलाई कहिले अनिद्राको महसुस भएन । एकैपटक राति १२ बजेसम्म छोरालाई स्तनपान गराउँथे । अनि आमाछोरा मज्जाले सुत्थ्यौं । एकैपटक बिहान ५ बजे मात्रै दूध चुसाउँथे ।
‘बच्चा सम्झेर कति रात झिमिक्क गरिनँ’
२ वर्षपछि फेरि छोरी जन्मिइन् । छोरी जन्मेपछि सारै रमाइलो लाग्यो । छोरी साथी जस्तै हुन्छिन् भन्ने सुनेकी थिएँ । त्यसपछि पनि सासूले ‘अर्को एउटा बच्चा नि जन्माइदेऊ न !’ भन्न थाल्नुभयो । मलाई बच्चा मनपर्ने अनि सासूको वचन पनि हार्न नसकेर ४० वर्ष पुग्न लाग्दा तेस्रो सन्तानलाई जन्म दिएँ ।
सासूले ‘अर्को एउटा बच्चा नि जन्माइदेऊ न !’ भन्न थाल्नुभयो । मलाई बच्चा मनपर्ने अनि सासूको वचन पनि हार्न नसकेर ४० वर्ष पुग्न लाग्दा तेस्रो सन्तानलाई जन्म दिएँ ।
मेरी सासू इन्दिरा याक्थुम्बा ज्ञानोदय विद्यालयकी प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो । बच्चाहरु ६ महिना भएदेखि उहाँले नै सुताउनुहुन्थ्यो । मसँग सबै जना बच्चाहरु डराउँथे । सासूले समेत मलाई ‘तिमी त यो घरकै आमा हौं’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले सबै बच्चाहरु हुर्किसके । सबै जना राम्रो पढ्छन्, अनुशासनमा बस्छन् । सबै कुरा मसित सेयर गर्छन् ।
निरन्तर गणित र विज्ञानमा निकै अब्बल थिए, डाक्टर बन्छन् कि भन्ने सोच थियो । तर, उनी म्युजिक पढ्न नेदरल्याण्ड गए । आमाका लागि सबैभन्दा खुसीको पल भनेकै छोराछोरीको खुसी रहेछ ।
केही समयअघि मलाई क्यान्सर भयो । श्रीमान् र छोराछोरीको रुवाइ र हालत देखेर निकै डराएँ । क्यान्सरलाई जितेपछि मलाई ‘मोह’ राम्रो होइन, कसैसँग पनि यति धेरै माया र लगाब हुनुहुँदैन जस्तो लाग्यो ।
(नेपालकी पहिलो मोडल डली गुरुङसँग नेपाली पब्लिक पत्रकार सिर्जना दुवाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २२, २०७७ २१:२२